Download Icon Aircraft A5 FSX & P3D - Rikoooo
A5 ụgbọelu Icon FSX & P3D
downloads 48 953
Ngwa ngwa Microsoft Flight Simulator X
Emelitere na 12 / 15 / 2018: Model na kokpiiti mepere emepe na-edozigharị kpamkpam, na-agbakwunye usoro itoolu dị elu, na-agbakwunye ụdị nke akọwapụtara maka Prepar3D ruo nke 4 +. Mpempe akwụkwọ ọhụụ. Ihe nlereanya kpamkpam n'eziokwu. Nku aka apia: site na VC, igbanye na "Wing Lock".
Nke a ụgbọ elu bụ maka FSX SP2 / Acc / Steam na P3D v1 v2 v3 v4 + naanị. O nwere kokpiiti mepere emepe (VC) nke yiri nke ụgbọ ala nwere ọrụ ala ya.
Gụnyere nku nku na eserese ... A na-ewu akwa ahụ maka akụkụ ka ukwuu site na iji eserese vector. Add-on nke kacha mma! Ihe nlere na 3d VC dika ihe kwere omume rue eziokwu.
Were ya na ị na-agba ọsọ na ụgbọ ala gị onwe gị dị ka ị ga-ejikarị ụgbọ ala gị mee, ọ bụghị nrọ? Maka ndị na-emepụta ụgbọelu A5 nrọ a ghọrọ eziokwu. A5 bụ ụgbọelu ụgbọelu abụọ na-eji ụgbọ elu na-agbagha. Amphibious, o nwere ike wepu ma gbasaa n'ala nakwa na mmiri, oké osimiri, osimiri, na ọdọ mmiri. A5 ụgbọelu nwere ike ịkwado 195 n'arọ ma ọsọ ọsọ ya bụ 193km / h. Mpekere (650 n'arọ) na ihe bara uru, ọ na-adị mfe transportable ebe ọ bụ na nku abụọ ya ka igwe na-abanye n'ime ụgbọala na ụgbọala. A5 ụgbọelu na-ejiri ngwa ngwa na-enweta ngwa ngwa na ọnọdụ mberede.
Akara ngosi Aircraft 5 natara kasị elu award nke 2010 Red Dot Design Award. The craft a ugbu a mere atụmatụ na 103 000 €, na price nke a okomoko Sedan.
Onye edemede: Andreas Koerner
Nardi FN-333 Riviera Version 1.0 (Ò Kwekọrọ n'Ozizi FS2004)